अन्ततः जितपुरसिमरामा पनि सुरु भयो स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रम, कसरी गर्ने बीमा ? के का लागी ? - AP Khabar
अन्ततः जितपुरसिमरामा पनि सुरु भयो स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रम, कसरी गर्ने बीमा ? के का लागी ?
सुप्रिया ढकाल २०७८ आश्विन १०, आईतबार (४ हप्ता अघि) १०८२ पाठक संख्या
बारा । देशब्यापी रुपमा सञ्चालन भैरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालीकामा पनि सुरु भएको छ । आज एक कार्यक्रमका बिच उपमहानगरकि उपमेयर सरस्वतीदेवी चौधरीले आफ्नै स्वाथ्य बीमा गराई यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
बि.स.२०७२ चैत २५ गते कौलालीबाट सुरु गरीएको यो कार्यक्रम छिमेकि जिल्ला तथा तहहरुमा सञ्चालनमा आईसक्दा पनि बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरमा सुरु हुन सकेको थिएन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डसंगको समन्वय पश्चात नगरमा आजदेखी यो सेवा सुचारु भएको जानकारी दिदै उपमेयर चौधरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उपचार गर्नबाट बञ्चित भएर बस्नुपरेको गरीब परिवारहरुका सदस्यलाई पनि उपचार गर्न मद्दत पुग्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाले सबै जनतालाई समयमै आफ्नो र परिवारको स्वाथ्य बीमा गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधरणलाई प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता पनि गर्ने उद्धेश्यले सुरु गरीएको यस स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस उपमहानगरमा पनि सञ्चालित भएपछि नगरका जनता हर्षित भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा वार्षिक कार्यक्रम हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको घोषणा, विगतमा भएका विभिन्न किसिमका प्रगतिको समीक्षा गरेर वार्षिक कार्ययोजना तय हुन्छ । सकेसम्म पायक पर्ने ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका लक्ष्य यसमा अन्तर्निहित छन्। । यो पारिवारीक बीमा कार्यक्रम पनि हो । सर्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार हाम्रा ऐन कानुनमा रहेको प्रावधान र प्रचलित कानुनलाई दृष्टिगत गरेर वार्षिक कार्ययोजना अनुसार यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।
बीमाका लागि सम्बन्धित स्थानिय तहका सेवाप्रदायक संस्था, नेपाल सरकार मातहत र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइन्छ । स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना दर्ता सहयोगी छनोट हुन्छ । जो हाम्रो बीमा एजेन्ट र अभिकर्ता पनि हो । ती सहयोगी घरघरमै जान्छन् तथ्यांक संकलन गरेर बीमामा सर्वसाधरणलाई आवद्ध गराउने काम गर्छन् । त्यही तथ्यांककै आधारमा बीमा हुन्छ भने बीमित भएकै आधारमा कार्ड पनि वितरण हुन्छ । त्यसको केही समयपछि सेवा लिने काम सुरू हुन्छ ।
वार्षीक १ लाखको सेवा पाउने
बीमा बापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभई साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ । ओपीडी सेवा, ल्याब, भर्ना, औषधीदेखि फार्मेसी परामर्शलगायत सेवा पाइन्छ । यो योगदानमा र आपसी समझदारीमा आधारित कार्यक्रम भएको हुनाले केही पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको स्थायित्वका लागि सक्ने परिवारबाट वार्षिक ३ हजार ५ सय लिईन्छ । त्यो बापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिईन्छ । ५ जनाको परिवारलाई एउटा इकाइ मानेर यो बीमा गरीन्छ ।
५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा क्रमशः २० हजारका दरले औषधी उपचारको सुविधा थपिँदै जान्छ । जेष्ठ नागरिक छन् भने प्रतिजेष्ठ नागरिकले १ लाखको उपचार सेवा पाउँछन्, त्यसका लागि कुनै योगदान गर्न पर्दैन ।
यदि कुनै परिवार अति गरिबको सूचीमा छ भने उसले पनि योगदान गर्न पर्दैन । उसको तर्फबाट गर्ने योगदान नेपाल सरकार आफैंले गर्छ ।